सेरोफेरो : देश गज्जबको छ
कहिले लोकतन्त्र भन्दै उफारिन्छौं। कहिले सर्वहारावर्गको क्रान्तिको नाममा कुर्लिन्छौं। हामी कुर्लेपछि दल र दलालको स्वार्थ पुरा हुन्छ। सर्वहारा बर्गको लागि भन्दै क्रान्ति गर्नेहरू सर्वहारी बन्न थाल्छन्। कुर्ची खान्छन्, सडक खान्छन्, ठूला ठूला भवन, योजनाहरू खप्लक्कै निल्छन्। क्षेत्रिय इयरपोर्टको नाममा कमिसन पनि खान्छन्। जागिरका विभिन्न तहतप्कामा आफ्ना मान्छे भर्ति गर्छन्। आफू र आफन्त अघाएपछि फेरि हामीलाई क्रान्तिका नाममा अर्ति छर्छन्। तर हामी सधैं भोकै हुन्छौं। लतारिन्छौं। लछारिन्छौं। अनि जसरी चुनावबाट उठेर देश संविधान सभा पुगेर पछारियो, त्यसैगरि पछारिन्छौं पनि। फेरि चुनावको हल्ला आउँछ, 'चुनाव गर्नुपर्छ, गर्नु हुन्न, लु गर त, हेरुँला' । झमेला बीचमा झण्डै १६ अर्ब बजेट खन्याउन तयार पारिन्छ। हामी भने चिल्लै। कसले भन्छ यो देशका नेताको बुद्धी छैन? नभाको भए घरि घरि एउटै काममा पटक पटक हामीलाई लदाउन सक्थ्यो? यहाँ त एक सय एक दुरदृष्टि भएका। गिद्धेसृृष्टिबाट जन्मेका नेता छन्। जो छिमेकी देशका अघि कमजोर छन् तर देश र जनताका अघि कामचोर छन्।
बरु हामीलाई भने जे भएपनि चलेकै छ। बोक्सीको नाममा हजुरआमाहरू जलाइन्छ। आफ्नै बाबु बलात्कारी बनेर निस्कन्छ। प्रहरीको मस्ट वान्टेड सुचिमा परेकाहरू गृहमन्त्रीको आसेपासे भएर डुलेकै थिए। सर्वोच्च न्यायलयले हत्याको दोषी ठर्‍याएकाहरू पनि सडकमा खुलेआमा हिडेकै हुन्। जेलभित्रबाटै नेताले अपराधी छुटाइदेउ भन्दै दबाद दिन फोन घुमाउन पाएकै छन्। छोरोको हत्यारालाई कार्वाही गर भनेर अनशन बस्दा, नेता भनाउँदाले फाइल नखोल भन्दै थर्काएकै छन्। हरेक अपराधलाई राजनीतिक रंग दिएर मुद्धा सल्टाउँछन्। उता कोरिया पठाइदिने नाममा दलालहरूले हाम्लाई ठगेर भुँडी पल्टाउँछन्।
उल्टाउने र गुल्टाउने काममा भुँइचालोको डर उत्तिकै छ। तर यहाँ विपत्तीको भुइँचालोले भन्दा अख्तियारको भुइँचालोले बजार हल्लाउँछ। अझ अख्तियारको भुइँचालोले भन्दा कर्मचारी सिन्डीकेटको माखेसांङ्लोले पुरै देश हल्लाउँछ। 'हावा सेवा निगम' उडाउने देश न पर्‍यो। सबै कुरा हावै हावामा नभए केमा हुन्छ त? एउटा जहाज बनाउनका लागि पचासौं कर्मचारी सिंगापुर भ्रमण जान्छन्। २५ करोडमा बनाएको जहाज पाँच दिनमै बिग्रेपनि के नै बिग्रेको छ र? देश छ, धन छ लुट्न त बाँकी छनी। कसले भन्छ नेपाली अनपढ र सोझो छ भनेर? बांगिनका लागि अब केही बाँकी छ र? यो देश साँच्चै गज्जबको छ।
अब न बांगिन बाँकी छ न नांगिन बाँकी छ। कहिले भारतसँग गएर नांगियौं, कहिले चाइनासँग गएर नांगियौं। खासमा हामी आफू आफू बीचमै नराम्ररी जेलिएर झांगियौं। कोही आउला र देश बनाइदेला भनेर कुर्दै बस्यौं। बाजेले कुरे, बाँकी कुर्ने जिम्मा बालाई छाडे। बाले कुरे, बाँकी कुर्ने जिम्मा हाम्लाइ छाडे। बज्यै, आमा र दिदीहरूले पनि त्यही गरे। हामीले कहिले सम्म कुर्ने हो? हजुरबाले कुरेको मेलम्चीको पानी उनका खनाँतीले पनि घाँटी भिजाउन नपाउलान जस्तो छ। पानीको काम, कहिले डुब्ला घाम। काम ढिलो गराएर हुन्छ वा लम्बेतान कुरा निकालेर हुन्छ। परियोजनाको अवधी लम्बाउने। लागत बढाउने र सरकारी ढुकुटी सक्काउने दाउमा रात दिन कर्मचारी देखि नेता, विदेशीसंस्था सम्म लागिपरेका छन्। माथिल्लो तामाकोशीमा ५ अर्ब घाटा/घोटाला भयो। आखिर के भयो त? एकदमै ठूलो कुरो भनेको हल्ला भयो। बस त्यत्ती हो। यहाँ हरेक पटक रातारात ठूला दल भनाउँदाहरूको सल्लाह हुन्छ अनि भोली बिहानै हिजोको कुरा मिलेन भनेर सबै तिर हल्ला हुन्छ। अरु केहुन्छ र?
हल्लैको कुरा। मनदेखि भन्नुपर्दा। देश देशकाले भन्दा विदेशीले धेरै हल्लाएका छन्। सत्ता विदेशले चलेको छ। बजार बिदेशले चलेको छ। संस्था विदेशले चलेको छ। अझ मुख्य कुरा, देश बास्तवमा विदेशको कमाइ, रेमिट्यान्सले चलेको छ। तर विदेश गएको सग्लो ज्यान रेमिट्यान्सको नाममा हरेक दिन लाश बनेर देश भित्रन्छ र हामीलाई दुखाउँछ। बढ्दो अमेरिकन डलरको भाउले चेपुवामा परेको नेपाली पैसो नेपाल भित्रने बित्तिकै विदेशी सामान किन्न बजार पुग्छ। टिभी, फ्रिज, पंखा, सोफा, डल्लफ के के हुन के के। त्यही बजारमा रित्तिएको पैसो फेरी विदेशिन्छ। खानेकुरै किन्न पर्‍यो भने पनि एक पाउ सामान किन्न चार पाउ पैसा लिएर बजार निस्कनु पर्छ। नुन १७। चिनी ७०। तेल १ सय ७०।
कसले भन्छ यस्तै तालले नेपालको विकाश हुन्न भनेर? के यहाँ विकाश भएको छैन? बजार भाउको विकाश भएको छ। जनसंख्याको विकास भएको छ। दिनहुँ भोट दिने मान्छे भन्दा बढी संख्यामा रहेका राजनीतिक दलहरूको विकाश भएको छ। पैसा नै नभए पनि बैंकहरूको विकाश भएको छ। खातामा रकम शुन्य नै किन नहोस्, पर्स भरि एक मुठ्ठा एटिम कार्ड बोकेर हिड्न पाइएको छ। खासमा यस्तै चाहिएको छ। देश साँच्चै गज्जबको छ।
विदेशमा बसेर नेपालमा सरकारी सेवाको पेन्सन पकाउने पनि यहिँ छन्। सरकारी जागिर खाएर विदेशी नागरिकता लिने धूनमा पनि धेरै छन्। सित्तैमा पाए अलकत्रा पनि खाएर मट्टितेलले कुल्ला गर्छन्। विद्युत प्राधिकरणकै उच्च अधिकारी चार अर्बको ट्रान्सफर्मर निल्न सक्छन्। बीस हजार अनुदान कुम्ल्याउनको लागि डाक्टरहरू पाठेघर फाल्ने व्यापार चलाउन सक्छन्। धेरै क्षमता भएका मान्छे छन् यहाँ। सडकमा मोडिफाइड बाइक बजारै हल्लने गरि ढ्वाँ ढ्वाँ गरेर कुदाउँन सक्ने खुबी भएका युवा छन्। जाबो बाइक त त्यसरी दगुराउँछन्, रकेट पाए भने झन कति कुदाउलान? विहान खाना खाएर चन्द्रमा गएका नेपाली युवा दिउँसो ट्वाइलेट गर्न देशमै फर्के भन्ने रेकर्ड राख्न सक्छन। कसले भन्छन् नेपालीले केही जान्दैनन भनेर? बरु नेपालीले जान्ने जस्तो अरु कसैले जान्दैनन्। किनकी देश गज्जबको छ।
सिमानाबाट रातारात जंगेपिल्लर हराउँदा पनि देश चुपचाप छ। उताका छिमेकीले हाम्रै जमिनमा बाँधेको बाँधबाट खडेरीमा सप्पै पानी उतै ओरालो लाग्दा पनि हामी चुपचाप छौं। बाढी आउँदा, बाँधका ढोका बन्द हुँदा, देशै डुबानमा पर्दा सरकार चुपचाप छ। देश फर्कदा सिमानामा आफन्त लुटिँदा हाम्रो प्रशाशन चुपचाप छ। तै पनि कसले भन्छ नेपालीहरूले बोल्न जान्दैनन भनेर? चाहिएको ठाउँमा पो बोल्दैनौं। गफाडी हामी, नचाहिएको ठाउँमा बरु अरुलाई बोल्न दिँदैनौं। काम थोरैले गर्छन्। गफ सबैले दिन्छन्। जस्तै मैले गरेका सप्पै कुरा गफै जस्ता छन्। केही समयपछि मैले भुल्छु, तपाइले भुल्नुहुन्छ। देशले भुल्छ। हामीलाई भुल्ने बानी जो परेको छ।
(published on 1st Sep,013 in SETOPATI online: http://setopati.com/blog/3540/#sthash.P4DTekK5.dpuf)